Isililo sikaMphephethe kwelomhlaba – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Isililo sikaMphephethe kwelomhlaba
UNDABAMLONYENI wodaba lokubuyiswa komhlaba kwaboHlanga kubonakala kusazothatha isikhathi lusezithebeni njengoba nabamaqembu ezepolitiki abeseka lokhu beqhubeka nokusebenzisa izinkundla abazitholayo ukufuqa lo mkhankaso. Ilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal elinguSihlalo we-IFP kuzwelonke uMnu uBlessed Gwala ugeqe amagula ekhuluma ngomhlaba ngosuku Lwamalungelo Abantu ngoLwesithathu. UGwala uthe njengoba kukhulunywa kabanzi ngosuku lwamalungelo abantu kuyishwa elikhulu KwaZulu-Natal ukuthi abantu bahleli emanzini ngenxa yabathile abafuna ukuphuca abantu umhlaba. “Njengamanje kukhona abasemshikashikeni wokufuna ukwephuca iNgonyama umhlaba ngokuthi kuqedwe Ingonyama Trust evikela amanenjana omhlaba owasala ngenkathi imibuso yamaKoloni neyobandlululo idikadika izwe lakithi.”
UGwala uthi kuyichilo elikhulu ukuthi kukhona abathile abanolimi olumbaxambili njengenyoka abakhocozela baye koNgangezwe Lakhe bafike bayixoshise nangezinkomo kuthi angafulathela nje bese bemgwaza ngeklwa ngemuva.
Uthi bamangele ngoba labo galakajana abayizinyoka ezinobuthi abasho ukuthi umhlaba uzothathwa bese uyiswa kubani. Uveze ukuthi abanye babo bakhuluma indaba yomhlaba kodwa bahlula ngisho ukulungisa izingadi emakubo nasemizini yabo. “Inkinga enkulu esibhekene nayo kuleli lizwe ekaSathane ocashe ngemuva kwesiphambano kanye nabaFarisi nabakhunkuli.”
UGwala uthi ngesikhathi uMntwana waKwaPhindangene ethula ISILO eSandlwana kwathi uma ekhuluma ngalesi simo sokwephucwa umhlaba weNgonyama yena awujulukela ngenkathi enza ukuba kushaywe uMthetho weNgonyama Trust, wabe esefikelwa isibibithwane ngezehlo ezivelela iNgonyama kanye noZulu ngokwephucwa umhlaba. Uthi sekukhona izinqushumbana ezihambe zihlekisa ngalokho zithi uMntwana waKwaPhindangene wenza ipolitiki eshibhile kusho abantu abazenza sengathi bayamthanda uMntwana kodwa uma bekhuluma ezindlini ezincane zaseRoyal Show Grounds bakhuluma okunye. UGwala uthe abakhuluma kanjena bajike bazenze bahle phambi kwabo kanti bayizinyoka. Uphonsele inselelo uHulumeni egameni le-IFP ukuthi yimaphi amalungelo okumele bawagubhe uma abantu bephucwa umhlaba? Uthi bayazibuza bayaziphendula ukuthi njengoba kade kugujwa usuku lwamalungelo abantu ngoLwesithathu, nosuku lwenkululeko seluseMome yini lena abantu abayobe beyibungaza uma kukhona abafuna ukubephuca umhlaba?
“Ngaphandle komhlaba akukho malungelo nankululeko abantu okumele bakubungaze. Kuyadabukisa ukuthi namhlanje kungabakhona abantu abathi akuthathwe wona la manenjana omhlaba asele alwelwa okhokho eSandlwana. Uma kuthathwa wona yini ezosala na?
Naphezu kokuba kukukhulu ukukhuluma ngelomhlaba kodwa i-IFP iyavuma ukuthi njengezwe sekuhanjwe ibanga elide ekuqinisekiseni ukuthi zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika sezinamalungelo alinganayo. Uthi bayabonga ngegxathu eselihanjiwe.
Uthi i-IFP ihlezi ingabagqugquzeli bamalungelo abantu njengoba yakwazi ukulwisana nenkululeko ngokuqhakambisa ukuthi abantu banelungelo lokuphila, ukuphepha kanye nesithunzi, yilungelo lokudla, indawo yokufihla ikhanda, amanzi, imfundo, ubulungiswa, ezempilo kanye namanye amalungelo aqukethwe kusomqulu wamalungelo alapha eNingizimu Afrika.
Uthi ngenxa yokukholelwa kakhulu ekubalulekeni kwempilo yomuntu, abakaze bababuke njengento yokubasebenzisa ukufeza izinhloso ezithize.
Uthi banesibopho sokuyalela uHulumeni ukuthi angagcini nje ngokuqhuba umkhankaso wokuhola uHulumeni ongenagcobho lwenkohlakalo ezwenikazi i-Afrika kepha uphinde uhole ngesibonelo ekuhlinzekeni ngezidingo eziyisisekelo ezifana namanzi, izindlu zangasese, izindlu kanye nogesi ukuze kufezekiswe uhlelo iMellennium Development Goals.
Uthi inselelo enkulu ekufezekiseni amalungelo ezenhlalakahle nomnotho aqukethwe uMthethosisekelo wezwe ubugebengu kanye nenkohlakalo ngoba inkohlakalo kanye nokungaphathi ngendlela akuhambisani nomthetho nesisekelo soMthethosisekelo wezwe.
Uchaze lesi simo njengesidicilela phansi ukuzibophezela koMthethosisekelo wamalungelo abantu nesithunzi, ukulingana kwabantu kanye nokuthuthukiswa kwamalungelo abo njengoba lona kungesiwona uHulumeni ovulelekile, ozibophezelayo wedemokhrasi edingwa uMthethosisekelo. Uma lokhu kungabhekisiswa futhi kunganqandwa kuyoba enkulu ingozi ezweni lakithi ledemokhrasi.
Yize kunjalo, uGwala uthi udaba lokulwa nenkohlakalo lubukeka lusekude ukuphela futhi ngeke bazigqaja ngokuthi sebenze konke okusemandleni. Uphinde waphawula nangodaba lokucwasana ngokubuhlanga ezikoleni zaKwaZulu-Natal isingenhla kwamadolo okuyisimo esidinga ukulungiswa ngokushesha ngokuthi kubizwe ukhukhulelangoqo womhlangano noma inkomfa evulelekile lapho kuzoxoxwa kabanzi ngesihlava. Uphonsela inselelo nabezemfundo ukuthi isandla kumele siqine nakothisha abasanensila yokucwasa abafundi ezikoleni ngokobuhlanga kanye nangokwenkolo yabo ngokuthi babaxoshwe ngoba angeke kwavunywa ukuthi kubekhona abantu abangosikhwili phambana nobhoko bona abababela ulaka sibe silubhula. “Noma ngubani ocwasa abanye ngokobuhlanga noma ngokwenkolo kumele athathelwe izinyathelo.”
UGwala uthi wonke umuntu ongumhlali waseNingizimu Afrika unelungelo lezomnotho, ezenhlalakahle namasiko njengokusho koMthethosisekelo.
Iqembu i-IFP likholelwa ekutheni ububha yisona sihlava esikhulu engcindezelweni yamalungelo abantu futhi kumele ubheke ngaleliso. Izinga eliphezulu lobubha, ukungalingani ngokomnotho nakwezenhlalakahle kanye nokuntuleka kwemisebenzi nenkohlakalo yikhona okuletha ungabazane lokuthi ngabe iNingizimu Afrika ngeyabo bonke yini abantu.
“Kukho konke lokhu, abanye abakwazi nokubungaza nje izidingo ngqangi ezifana nokudla, izindlu, amanzi nogesi, imfundo esezingeni kanye nezempilo. Lokhu akusikhona nje kuphela izinkomba zengcindezelo yomnotho kepha ukunganaki nokucwasa okuvela kuHulumeni kanye nasezimbonini ezizimele. Ngaphambi kokuba sibungaze amalungelo abantu, kuningi okusamele kwenziwe ukuze abantu bawabungaze ngokugcwele amalungelo abo”.
Uthi abantu uma besacasha ngezihlahla emahlathini bevika izinyoka eziyingozi uma imvelo ibaxina, besaphuza amanzi nezimbongolo, abafundi besafundela phansi kwezihlahla nasezikoleni zodaka, iziguli zisalala emabhentshini ezibhedlela abahlengikazi bengazinakile, ugesi ungekho ezindaweni eziningi kanye nezidlu lokho kuphambene namalungelo abo akumthetho-sisekelo.
Kuningi okusamele kwenziwe lapha eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi amalungelo abantu ayahlonishwa uma kuziwa kwezempilo, ezenhlalakahle, ezezindlu, ezemfundo kanye nakwezomthetho.
Kubalulekile ukuthi iNingizimu Afrika iqinisekise ukuthi iqinisekisa amalungelo abantu ababuthaka nabanganakiwe esiphila kanye nabo emphakathini bese futhi kuba nokungenelela kweNational Action Plan kulokhu.